Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Nokia in Edge Samsung Galaxy qod6 / S5 / S4 / Note 4
Transfer Xiriirada ka Nokia in Edge Samsung Galaxy qod6 / qod6 / S5 / S4 / S3
Hesho phone jir Nokia, sida Nokia 2720a-z, muddo dheer, waxaana ay haatan u soo iibsadaan qalab cusub brand Samsung ah, tusaale ahaan, Galaxy qod6 Edge? Nasiib darro, xiriirada oo dhan ay ku xayiran on telefoonka jir Nokia. Waxaad si ay u gudbiyaan xiriirada ka Nokia in Samsung Galaxy S, si aad u la wadaag saaxiibadaada kartaa telefoonka cusub. In this article, waxaan idinku talinaynaa laba xal u fududahay inay ka sameeyaan.
Habka 1. Transfer Xiriirada ka Nokia in Samsung Galaxy qod6 Edge / qod6 / S5 / S4 / S3 la MobileTrans
Habka 2. Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Samsung in Samsung la Samsung Smart Switch
Habka 1. Transfer Xiriirada ka Nokia in Galaxy qod6 Edge / qod6 / S5 / S4 / S3 la MobileTrans
Bedelka xiriirada ka Nokia in Samsung Galaxy si fudud!
Xiriirada Transfer ka Nokia in Samsung Galaxy S / Fiiro la info xiriir dhamaystiran.
Ka sokow xiriirada, waxa nuqul SMS, music, sawiro iyo music ka Nokia in Samsung Galaxy.
La jaan qaada Samsung qod6 Edge, qod6, S5, S4, S3, Note 4, Ogow 3 iyo ka badan iyo telefoonada Nokia Symbian.
First of dhan, download iyo rakibi Wondershare MobileTrans on your computer. Markaasay aad arki doonaa suuqa kala muhiimsan ee barnaamijka sida soo socota. Si aad xog ka Nokia wareejiyo Samsung Galaxy S ama Ogow, waxaad u baahan tahay in ay doortaan ikhtiyaarka ah "Phone in Phone Transfer" dhanka bidix. Markaas isticmaali cable USB ah in ay ku xidhmaan telefoonka Android ama kiniin in kombiyuutarka.
Tallaabada 2. Dooro xogta aad rabto in lagu wareejiyo ka Nokia in Samsung Galaxy S 6 Edge / qod6 / S5 / S4 / S3
Marka telefoonada waa la ogaan kombiyuutarka, waxaad arki doonaa suuqa kala socda. Waxaad isticmaali kartaa "Flip" badhanka si ay u qotomiyey il iyo qalabka Ahaado. Hubi phone Nokia ah waa isha mid (bidixda). Markaas eegista waxaad dooran kartaa nooca file in aad rabto in lagu wareejiyo ka Nokia in Samsung ay. Just calaamadee sanduuqa ku yaala xagga hore ee nooca faylka.
Tallaabada 3. Nuqul Photos, Music, Video, Xiriirada iyo SMS ka Nokia in Device Android
By default, dhammaan xogta aad ku wareejin karaa saxday. Waxa kale oo aad ka saari kara calaamado ka hor content wax aadan jeclaan si ay u gudbiyaan. Haddii aad rabto in aad masixi dhammaan macluumaadka telefoonka Nokia ah, oo aad samayn kartaa wada adigoo "data Clear hor nuqul". Markaas, guji "Start Copy". Wada hadal A baxa, kuu sheegaysa boqolkiiba bar horumarka. Ka dhig labada qalabka aad ku xiran ilaa kala iibsiga la dhammeeyo.
Habka 2. Transfer Nokia Xiriirada in Edge Galaxy qod6 / qod6 / S5 / S4 / S3 by Isticmaalka Samsung Smart Switch
Samsung Smart Switch waxaa si gaar ah loogu tala galay shirkadda Samsung, loo isticmaalaa in lagu xog ka iPhone, Nokia phone, phone BlackBerry iyo Android phone wareejiyo qalabka Samsung Galaxy. Sidaas darteed, haddii aad xoojiyaa telefoonka jir Nokia la Nokia PC Suite, waxaad isticmaali kartaa Samsung Smart Switch soo saaro xogta gurmad iyo kala iibsiga si aad Galaxy S3 / S5 / S4 / Note 4.
Tallaabada 1. xiriirada kaabta on Your Old Nokia Phone
Download Nokia PC Suite iyo rakibi kombiyuutarka. Connect telefoonka Nokia in kombiyuutarka via cable USB, Bluetooth iyo infrared. Ka dib markii ay ku xiran, u isticmaalaan Nokia PC Suite in ay xiriir gurmad ah ee aad taleefan Nokia. Ka sokow xiriirada, waxaad kale oo gurmad jadwalka taariikhda, qoraalo, Bookmarks, fariimaha qoraalka ah, goobaha iyo in ka badan.
Tallaabada 2. Download iyo Run Samsung Smart Switch
Tag Website-ka rasmiga Samsung oo soo bixi Samsung Switch Smart . Uma baahnid in aad si ay u rakibi. Just u ordaan oo isku xiro qalab Samsung Galaxy, sida Samsung S3 / S5 / S4 / Note 4, si computer la cable USB ah.
Tallaabada 3. Nuqul Nokia Xiriirada in Galaxy S3 / S4 / S5 / Fiiro 4
In uu furmo suuqa hoose, dooran Nokia oo guji Next . Dhammaan xogta ku gurmad Nokia ee la soo bandhigi doonaa. Sax xiriirada oo guji Tag bilow si ay u gudbiyaan xiriirada Nokia in aad qalab Samsung Galaxy.
Articles badan oo ku saabsan Nokia oo Transfer Android Phone Data
Sidee si ay u gudbiyaan Contents ka Nokia si iPhone
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Android inay iPhone
Sida loo dhaqaaq Faylal ay ka Android inay Android
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Samsung si iPhone
> Resource > Samsung > Transfer Xiriirada ka Nokia in Samsung Galaxy S3